Mukana wekudyara muDAX yeGerman? | Ehupfumi Zvemari
Mukana wekudyara muGerman's DAX?
Iyo DAX, DAX 30 kana DAX Xetra ndiyo yebhuruu chip equity index yemakambani makuru makumi matatu kuGerman akanyorwa paFrankfurt Stock Exchange. Kuve parizvino imwe yemakenduru ayo anoratidza kuvimba kwakanyanya pamberi pevashambadzi, pamusoro pemamwe misika yeEurope yekukosha kwakakosha. Nenzvero huru mukuwedzera kwenguva mumisika yemari. Uye izvo kune rimwe divi, zvakave nekuita kuri nani mushure mekuwedzera kwecoronavirus mupasi rese. Hazvishamisi kuti ndiye mumiriri weiyo hupfumi locomotive yeEuropean Union.
Kune rimwe divi, uye nekuremekedza iyo yazvino nguva, iyo Dax yeGerman yadonha kudzokera kune yakajeka exponential inofamba yemazuva mazana maviri pa200 mapoinzi, kubva kunharaunda ye11.780 mapoinzi. Mushure mekudzokororwa kukuru kubva pavhiki dzekupedzisira dzaKubvumbi uye izvo nekudaro zvakaisa toni kune ese ese emusika wemasheya indices munzvimbo yayo. Chero zvazvingaitika, hatigone kukanganwa kuti kumusoro, pamusoro pezviuru gumi nezvitatu poindi kana zvishoma, iyo Dax yaizove nenzira yemahara yekushanyira iyo-yenguva-yepamusoro pamapoinzi makumi masere nemazana masere nemakumi masere nemashanu. Ndokunge, ine yakasarudzika dhizaini yepakati uye kunyanya yakareba nguva.
Hazvishamise kuti chikamu chakanaka chevashambadziri vadiki nepakati vakasarudza uyu musika wepasi rese kuti kuchengetedza kwavo kubatsire. Nekuda kwekuvimbika kukuru kwainopa kune vese vezvemari vamiririri uye kuti inoshandura kuwanda hombe yezvibvumirano muzvikamu zvese zvekutengesa. Zvishoma pakakwirira kupfuura mamwe ma indices, senge IBEX 35 seimwe yeanonyanya kukosha mukati meEU. Iko zuva rega rega mazita asingaverengeki anotsinhaniswa pakati pevashambadziri kubva pasirese pasirese, zvese mukutenga nekutengesa mashandiro. Naizvozvo, iyo ndeimwe yesarudzo idiki uye yepakati varimi vemari vane kubva zvino zvichienda mberi.
1 DAX: chii chinopa?
2 Nzira dzekushanda pamwe neDAX
3 Chengetedza mari muDAX
4 ETFs inowanikwa mumusika
5 DAX Kutengesa Matipi uye Maitiro
6 Yakabatanidzwa tsika muDAX
7 Zvakanakira uye njodzi dzekudyara kuGerman
DAX: chii chinopa?
MuDAX, DAX 30 kana DAX Xetra inosanganisirwa makambani akakosha kwazvo eEuropean continent. Dzese dzine capitalization hombe uye izvo zvinobvumidza mutengo wekutenga kana wekutengesa kuti ugadziriswe nyore nyore. Mune mamwe mazwi, hapana dambudziko kushanda neaya mare emari. Kana zvisiri, pane kudaro, zvinzvimbo zvinotorwa zvakangoita ipapo, chero kwauri kuenda kana nyika yaunogara. Nepo kune rimwe divi, zvakafanirawo kusimbisa kuti iyo German DAX ndiyo index index mukati mekondinendi yeEurope, kunyanya kune mamwe maEurope indices. Uye izvo zvinobatsira iyo yekuhaya vhoriyamu kuve yakakura kupfuura mune vamwe.
Kana isu hatikwanise kukanganwa panguva ino kuti indekisi iyi mumabhizimusi emunyika inoonekwa seyakagadziriswa sezvo iine zvikamu zvakawanda zvebhizinesi. Kubva pane yechinyakare kusvika kune inonyanya kugadzirwa, seiya inomiririrwa nehunyanzvi hutsva uye iyo inopa yakakosha kupihwa pamusika wemasheya. Ehezve, imwe yeakanyanya kukosha maererano nekondinendi yakare uye nekudaro sereferenzi yehuwandu hweava vadiki nepakati varimi. Kwete zvakawanda maererano nehuwandu, asi hongu maererano nehutano. Kusvika padanho rekuti pakupedzisira iri imwe yemahombe ekutengesa nzvimbo mune ino yemari asset kirasi. Kunyangwe pasina kukanganwa kuti iyo DAX seindekisi inogona kushanyira gumi nemazana gumi nemashanu emapoinzi munguva yakareba kwazvo.
Musiyano uripo pakati pekutengesa nekudyara muDAX
Kutengesa nekudyara zvinopa nzira mbiri dzakasiyana dzekuwana mukana kune iyo DAX. Kana uchitengesa, zvigadzirwa zvemari zvinoshandiswa kufungidzira pamitengo yako kufamba usingatengi masheya kana mari. Nekudyara mari, urikutora wega muridzi weimwe kana zvimwe zvinhu zvinoteedzera kukosha kweDAX.
Tengeserana neDAX. Paunotengesa DAX, unoenda wakareba kana mupfupi mukufamba kwayo kwemutengo uchishandisa zvigadzirwa zvemari senge maCFD uye nekuparadzira kubhejera. Izvi zvinounza mabhenefiti akati wandei kune vapfupi nepakati vashambadzi venguva, kusanganisira kugona kuwedzera - zvichireva kuti iwe unongofanirwa kuisa muchikamu chehukuru hwako hwekutengesa kuti uzarure.
Vatengi vezvinhu zvakasiyana siyana zvekudyara vanogona kutenga nekutengesa iyo DAX maawa makumi maviri nemana pazuva kubva na24 manheru neSvondo kusvika na11 manheru neChishanu. Kana, iwe unogona kutora mukana wevhiki kuvhura chinzvimbo neMugovera kana Svondo. Saka kana iwe ukaona mukana wepundutso - kana uchida kukomberedza - kunze kwemaawa enguva dzose ekutengesa, unogona kutora matanho. Pachikuva chekutengesa cheava vanoshanda, unogona kuona iyo DAX inozivikanwa seGerman 10 uye nekudaro vhura account nhasi kutanga kutengesa.
Nzira dzekushanda pamwe neDAX
Kune maviri makuru mhando dzeDAX CFDs uye anoparadzira mabheti: mari uye neramangwana misika.
Paunovhura chinzvimbo pane indekisi yemari, iwe uri kutengesa pamutengo wako wepareti - iro danho rauri kutengesera parizvino. Kupararira kudiki pane indices dzemari, zvichiita kuti dzifarirwe nevatengesi venguva pfupi. IG's DAX inopararira, semuenzaniso, tanga pane chete 1,2 mapoinzi. Nekudaro, kana iwe ukabata yakavhurika mari indekisi poindi kweanopfuura rimwe zuva rekutengesa, iwe uchafanirwa kubhadhara mari yeusiku mari yemari.
Paunovhura chinzvimbo mune ramangwana indekisi, iwe uri kutengesa pamutengo wako wenguva yemberi - mutengo unobvumiranwa nhasi wekutakura mune ramangwana zuva. Index ramangwana rakapararira kupfuura mari indices, asi kupararira kunosanganisira mari dzehusiku dzekubhadhara mari. Saka kana iwe uchironga kuchengeta yako yekutengesa yakavhurika kwemazuva akati wandei, index ramangwana rinogona kupa zvirinani kukosha.
Chengetedza mari muDAX
Kunge chero stock index, haugone kuisa mari zvakananga muDAX. Nekudaro, iwe unogona kuisa mari mukutsinhana mari iyo yakagadzirirwa kuteedzera mutengo weDAX. Kana iwe unogona kutenga migove mumabhizinesi anoita iyo indekisi.
Kuisa mari kunosanganisira kusarudza zvinhu zvekuwedzera kune yako portfolio, nechinangwa chekuzvibata mukati nepakati nepakati, wozozvitengesa kuti uwane purofiti. Iwe unogona zvakare kuwana kubva kune zvikamu - kana bhizimusi rakasimwa richidzorera chikamu chemubhadharo waro kune vagovana.
Iwe haubatsirike kubva pakuwedzeredza iwe paunenge uchiisa mari, saka uchafanirwa kubhadhara izere kukosha kwechinzvimbo chako kumberi. Izvo zvinokwanisika kutora chinzvimbo chipfupi - semuenzaniso kuburikidza neiyo inodzosera ETFs - asi vazhinji varimi vanongoenda kwenguva refu.
Gadzira account kuti utange kuisa mari mu ETFs
Nzira dzekudyara muDAX. Ose ari maviri kutengesa kutengeserana uye ETFs zvinokutendera iwe kuti uise mari mumakambani makuru eGerman, asi nenzira dzakasiyana zvishoma.
Iyo DAX inokwira kumusoro uye pasi zvinoenderana nekufamba kwemutengo wemugove wemakambani anoita indekisi: seVolkswagen, Bayer neDeutsche Bank. Nekutenga masheya mumakambani aya, unogona kuwana kuratidzwa kwakafanana nekudyara muDAX pachayo.
Kuti uvake portfolio inonyatsotevera kufamba kweiyo DAX, iwe unofanirwa kutenga zvese zvikamu makumi matatu uye kuratidza hunhu hunorema hweiyo indekisi yepamutemo, rinova basa rakaoma. Naizvozvo, vatyairi vazhinji vanosarudza mashoma masheya eportfolio yavo uye vanoshandisa ETFs pachinzvimbo kana vachida kuisa mari muDAX yese.
ETFs inowanikwa mumusika
Paunotenga DAX ETF, urikuisa mari muhomwe inoteedzera mutengo weiyo index yacho. Mazhinji DAX ETFs anoita izvi nekubata masheya anoumba indekisi, saka kana iwe ukatenga uri kunyatsoisa mari mumakambani ese makumi matatu ane chinzvimbo chimwe chete.
ETFs dzinotengwa uye dzinotengeswa mukuchinjana, senge masheya. Saka iwe unogona kuisa mari mavari uchishandisa iwo chete mupi waunoshandisa pakutengesa masheya.
Asi chii icho chinofambisa mutengo weiyo index yeDAX? Iyo DAX inowanzo kuve nekusagadzikana zvakanyanya kupfuura mamwe makuru maindekisi, ichiiita iyo inozivikanwa index pakati pevatengesi. Heano zvimwe zvakakosha zvinhu zvinotyaira iyo DAX mutengo chiito.
Makambani eGerman anowanzoita zvakanaka kana hupfumi hwese hwuri kuwedzera uye ivo vanonetseka munguva dzezvehupfumi. Saka zviratidzo zvehupfumi zvinogona kuve nemhedzisiro pane iyo DAX.
Panyaya iyi, hazvigone kukanganwika kuti pakupedzisira Germany ndiyo hupfumi hukuru muEuropean Union (EU), uye zvinhu zvakawanda zveDAX zvinotengeswa muEurope yose. Saka misoro isina kunaka yakakomberedza EU inogona kutamba kune mutengo wayo.
Iko makambani eGerman akakosha anonyanya kutaridzika nekunze: BMW, Volkswagen neBayer, semuenzaniso, zvinoenderana nekutengesa kunze kwenyika kuti uwane purofiti. Simba reeuro rinogona kuita mutsauko mumutengo wemugove wako.
Mishumo yemihoro. Akanaka mavhoti mibairo mibairo inogona kutumira iyo DAX kumusoro, nepo yakaipa iyo inogona kuitumira pasi. Iyo indekisi inoremerwa neyemari, saka makambani mahombe anochinja huwandu hwayo zvakanyanya.
DAX Kutengesa Matipi uye Maitiro
Sarudza yako yekutengesa maitiro. Chinhu chakakosha chekutarisa usati watanga kushambadzira ndechekuti inguvai yaunoda kushandisa kuongorora misika, uye kwenguva yakareba sei iwe yaunoronga kuchengeta nzvimbo dzichivhurika
Dzidza ako ehunyanzvi zviratidzo. Vatengesi vazhinji vanoshandisa zviratidzi kubatsira kuona mikana mitsva uye nguva yavo yekutengesa. Saka iri zano rakanaka kudzidza kushandisa RSI, kufambisa mavhavha uye nezvimwe.
Teerera kune nhoroondo yemutengo. Mutengo usati wapera pamusika unogona kupa zvaunoda kuziva kuti zviri kuenda kupi. Kudzidza kudzidza machati eDVD kunobatsira zvakanyanya kana uchitsvaga maitiro matsva
Gara wakatarirwa kushambadziro zvakachipa. Hutano hwehupfumi hweGerman, Europe uye nekunze hunokanganisa mutengo weDAX. Saka gara wakatarisira mishumo mitsva nezve inflation, GDP kukura uye basa
Shandisa zvekuzivisa zvekuzivisa. Zvekutengeserana zvinokuzivisa iwe kana mamwe mamiriro akasangana muDAX. Unogona kuseta yambiro yekutenga iyo iyo DAX painopfuura imwe nhanho, semuenzaniso. Unogona kusarudza kana iwe uchida kugamuchira email, iyo SMS kana yekuzivisa push
Gadzira chirongwa. Kugadzira chirongwa usati watanga kutengesa icho chinoraira kuti ndedzipi misika yaunotengesa, chiyero chemubairo wemubairo uye zvimwe inogona kuve nzira inobatsira yekubvisa mufaro kubva muchiitiko chako chezuva nezuva.
Ita shuwa kuti iwe unonzwisisa izvo zvekutanga. Zviwanikwa senge IG Academy zvinogona kubatsira kukudzidzisa iwe zvese zvaunoda kuti uzive nezve index index usati watanga.
Yakabatanidzwa tsika muDAX
Germany ndiyo hupfumi hukuru muEurope uye yechina pasi rose. Inotungamirwa nekugadzirwa kwemaindasitiri, nyika inotengesa kunze kwenyika kupfuura chero nyika ipi zvayo kunze kweChina neUS, uye mari yayo yekutengesa inogara ichikwikwidza neyeChina. Nyika iri zvakare kumusha kune akawanda emakambani mazana mashanu epasirese anotengeswa neruzhinji, ichiita nyika yakakosha kune vekunze vekunze.
Makambani makuru eGerman ari pane iyo DAX 30 index, iyo yakafanana neDow Jones Industrial Avhareji muUnited States. Iine makambani makumi matatu makuru eGerman nemusika wemari wakanyorwa paFrankfurt Stock Exchange. Iyo indekisi ine mamwe mazita anozivikanwa seAdhidas AG, BASF SE, BMW AG, Bayer SE, Siemens AG, MAN SE, nevamwe vazhinji.
Nyika zvakare ine zviwanikwa zvakakosha zvezvisikwa, zvinosanganisira uranium, huni, potashi, nickel, mhangura, uye gasi rechisikigo. Nezve simba rinowanikwazve, nyika ndeimwe yevanogadzira makuru emagetsi epasi pasi. Mu2019, anovandudzwa akavharirwa marasha kuti ave sosi huru yesimba yeGerman. Pakazosvika 2030, nyika inoronga kuburitsa 65% yesimba rayo kubva kumagetsi.
Zvakanakira uye njodzi dzekudyara kuGerman
Germany inogona kunge iine hupfumi hwakasimba, asi hunhu hwayo hunotungamirwa kunze kwenyika hwunoita kuti huve panjodzi yekunze njodzi. Semuenzaniso, nhengo yenyika yeEuropean Union yaunza zvakanakira, asi kunewo zvimwe zvakaipira kuve chikamu chemubatanidzwa wezveupfumi wakakura kudai.
Zvakanakira kuisa mari kuGerman zvinosanganisira: hupfumi hwakasimba: Germany ine imwe yehupfumi hwakasimba kwazvo pasirese, zvese maererano nehukuru uye kunze kwenyika. Mu2018, iyo yakazara nyika chigadzirwa (GDP) yakasvika $ 3,997 trillion.
Nhengo dzeEuropean Union: Germany yakabatsirwa zvikuru nekuiswa kwayo muEuropean Union, iyo yakaibatsira kuti ive nemakwikwi zvakanyanya kune dzimwe nyika dzakasimukira nedzimwe nhengo dzeyuro zone.
Vashandi nemitero: Vashandi veGerman vakadzidza zvikuru uye, zvichienzaniswa nedzimwe nyika dzeEuropean Union, vanoramba vachiratidzira kashoma. Iyo yenyika yakabatana mutero kodhi uye bhizinesi-inoshamwaridzika marongero zvakare anofarira makambani anotengeswa neruzhinji.
Njodzi dzekudyara kuGerman dzinosanganisira:
European Union bailouts: Germany yakabatsirwa nekuve nhengo yeEuropean Union, asi matambudziko echikwereti akazvimirira, senge dambudziko reEuropean chikwereti rakakwira pakati pa2010 na2012, vakamanikidza kutora mukana mukubvisa mari.
Kupararira kweEuropean: Nyika dzeEuropean Union dzakabatana kuburikidza nenyaya dzechikwereti. Kukundikana kwenyika imwe kubhadhara chikwereti chayo kunogona kutungamira vamwe kutarisana nedambudziko rakafanana uye pakupedzisira kukuvadza mabhalanzi eGerman (uye ayo emabhangi eGerman).
Huwandu hwevanhu: Germany ine huwandu hwevanhu vanokwegura vanogona kuisa mutoro unowedzera pazvirongwa zvekugara zvakanaka kwevanhu. Nechiyero chekubereka che1,45 muna 2010, nyika inotungamira vamwe vazhinji kuMadokero, asi ichiri pazasi peiyo chaiyo yekutsiva ye2,1. Nekudaro, mwero wepamusoro wevatorwa, senge iwo akauya nekutanga kwedambudziko reEuropean rekutama muna2015, zvinogona kubatsira kudzikamisa zvirongwa izvi.
Hupfumi huri kudzikira pasi: GDP yeGerman yakawa ne0,1% mukota yechipiri ya2019. Pane zvikonzero zvakawanda izvi zvakaitika, kusanganisira kunetsekana nezvekutengeserana kwepasi rose kwakadzora hupfumi hwakawanda, saka Germany haina kusangana neiyi njodzi yega. Nekudaro, kudonha kweGDP kunoramba kuri njodzi inofanirwa kucherechedzwa, sekudaro kuwedzera kwemitero, iyo inogona kunge iine chinokanganisa nyika ine huwandu hwepamusoro hwekunze.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ehupfumi Zvemari » Zvigadzirwa zvemari » Bolsa » Mukana wekudyara muGerman's DAX?
Kudzoreredza hupfumi kuchave sei?
Chii chinonzi kukosha kwekudyara?